Hubzilla 5.6 biara na oganihu na ndebanye aha ndi mmadu na ndi ozo | Site na Linux
Hubzilla 5.6 bịarutere na ndozi na ndebanye aha ndị ọrụ na ndị ọzọ
E wepụtara ọhụụ ọhụrụ nke ikpo okwu maka owuwu nke netwọk mmekọrịta Hubzilla 5.6, Nke a bụ nsụgharị nke na-agbakwunye mgbanwe ole na ole, mana nke ndị ahụ ewepụtara, ntụgharị na ndekọ aha onye ọrụ pụtara ìhè, yana ndozi dị na modul ọkpụkpọ oku yana mgbanwe ndị ọzọ.
Maka ndị na-amaghị Hubzilla, ị kwesịrị ịma na nke a bụ usoro ntanetị weebụ (CMS) dbụ oghere mepere emepe iji mepụta mkpokọta njikọta. Dị ka ọrụ nnabata, weebụsaịtị e kere na Hubzilla dịpụrụ adịpụ na enweghị echiche onye na-enweta ọdịnaya ha, na njikwa nnweta data na-ejedebe ịtọ ikikere n'etiti akụkọ ọ bụla na saịtị.
Ihe omume a na-enye ihe nkesa nkwukọrịta nke jikọtara na sistemụ nrụọrụ weebụ, nke ejiri sistemụ njirimara na njikwa njikwa na netwọọdụ Fediverse.
Hubzilla Na-akwado sistemụ nkwado jikọtara ọnụ iji rụọ ọrụ dị ka netwọkụ mmekọrịta, ọgbakọ, otu ọgbakọ, Wiki, usoro maka ibipụta isiokwu na weebụsaịtị. Etinyere m ụlọ nkwakọba ihe data na nkwado WebDAV ma anyị na-arụ ọrụ na ihe omume na nkwado CalDAV.
1 Main atụmatụ ọhụrụ nke Hubzilla 5.6
1.1 Etu esi etinye Hubzilla na Linux?
Main atụmatụ ọhụrụ nke Hubzilla 5.6
Na mbipute ọhụrụ ahụ, na mgbakwunye na ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ndozi na ndozi ọdịnala, agbakwunyere ọtụtụ ihe ọhụụ dị mkpa dị ka ndozi emere na modul ndebanye onye ọrụ, ebe obu na emezighariri nke a. Ugbu a, n'oge ndebanye aha, nhazi nke ọma nke akụkụ ya dị, gụnyere oge etiti oge, ọnụọgụ kachasị nke ndebanye aha maka oge, nkwenye na nkwenye nke ndị ọrụ, nke ikpeazụ mere ka o kwe omume na-enweghị iji adreesị ozi-e.
Mgbanwe ọzọ nke pụtara na nsụgharị ọhụrụ bụ nke ahụ emeela ka usoro modul ọkpụkpọ oku ka mma nke Hubzilla, nwee ike igbochi ndebiri ndebanye yana nkwado asụsụ.
Ọ na-kwuru na gbakwunyere usoro nkwado nkwado zuru oke iji chekwaa oge na nchekwa data Redis, nke nwere ike ịba uru maka ịbawanye nzaghachi nke nnukwu sava Hubzilla.
Tụkwasị na nke ahụ, e mere ọrụ iji melite arụmọrụ nhazi nke ọtụtụ usoro, nke metụtakwara arụmọrụ zuru ezu nke usoro ahụ.
Finalmente maka ndị nwere mmasị ịmatakwu banyere nke a ọhụrụ version, ị nwere ike ịlele nkọwa na esonụ njikọ.
Etu esi etinye Hubzilla na Linux?
Ntinye nke ikpo okwu a di mfe, ha kwesiri inwe ihe di nkpa maka oru webiti (ma o bu LAMP to).
Anyị nwere ike ibudata ihe dị mkpa maka ntinye ya site na ịme iwu ndị a (ebe weebụsaịtị bụ ndekọ ebe ị nwere ebe nrụọrụ weebụ gị iji hubzilla ma ọ bụ ohere ị ga-enye n'elu ikpo okwu na ihe nkesa gị ma ọ bụ kọmputa gị).
Mgbe ahụ, anyị ga-pịnye ihe ndị a:
Ugbu a anyị ga-emepụta nchekwa data maka ikpo okwuỌ bụrụ na ị nwere MySQL ị nwere ike ime ya site na otu ọnụ site na imezu iwu ndị a:
Ebe ikwesiri igbanwe ihe ndia maka data i kenyere “hubzilla” bu aha nchekwa data, “user’ @ ’localhost” onye ozo maka ebe nchekwa data ahu ya na “password” okwuntughe nke nchekwa data ahu.
N'ikpeazụ site na ihe nchọgharị weebụ must ga- enyerịrị url na ụzọ ị kenyere n’elu ikpo okwu gị na ihe nkesa ma ọ bụ site na mpaghara gị na kọmputa, dị nnọọ pịnye:
Site n'ebe ahụ, ị ​​ga-etinye data nke nchekwa data nke ị mepụtara iji jikọọ ya na ikpo okwu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Hubzilla 5.6 bịarutere na ndozi na ndebanye aha ndị ọrụ na ndị ọzọ
Okpokoro KrakenD: Ugbu a bu oru oghe nke Linux Foundation!